Marriott amin'ny misiona miaraka amin'ny Hotely vaovao any India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives ary Nepal
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Marriott amin'ny misiona miaraka amin'ny Hotely vaovao any India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives ary Nepal
Nanambara ny Marriott International androany fa nanao sonia fifanarahana hotely vaovao 22 any Azia atsimo - misy an'i India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives ary Nepal - tao anatin'ny 18 volana lasa, manantena ny hanampy efitrano mihoatra ny 2,700 amin'ny portfolio-nivelarany haingana.
Ny Marriott International amin'izao fotoana izao dia ny trano fandraisam-bahiny misy efitrano betsaka indrindra ao amin'ny faritra Azia atsimo ary manantena ny hanohy ny fitomboany mafy amin'ireo sonia vaovao ireo.
“Amin'ny taona tena tsy ampoizina, ireo sonia ireo dia porofon'ny fahaizan'i Marriott International mihazakazaka mitarika fitomboana matanjaka ao anatin'ny tontolon'ny fandraisam-bahiny izay mivoatra hatrany,” hoy ny fanamarihana Rajeev Menon - Filoham-pirenena Asia Pasifika (tsy anisa an'i Greater China), Marriott International. “Mariky ny fahatokisan-tena avy amin'ireo tompona sy tompon-trakanay izay tafiditra ao anatin'ny dian'ny fitomboantsika ity. Feno fankasitrahana izahay noho ny fanohanany sy ny fahatokisan'izy ireo ny herin'ny marika rehefa manohy mandray tsara ireo tafaverina izahay. ”
"Ireo sonia ireo dia manamafy ny fanoloran-tenantsika ho an'i Azia atsimo ho toy ny faritra avo lenta izay itohizanay mitombo sy mifampiraharaha amina mpanjifa manitatra amin'ny alàlan'ny fampidirana bebe kokoa ny marika marika sy ny traikefa an'i Marriott any amin'ny toerana mahafinaritra," Kiran Andicot - Fampandrosoana ny filoha lefitry ny faritra, Azia atsimo, International Iraisam-pirenena. Manantena ny fisokafan'ireto trano fandraisam-bahiny vaovao ireto amin'ny ho avy izahay ary hijery ny fahafaha-manao fampandrosoana amin'ny ho avy manerana ny faritra. ”
Fanirian'ny tompony ho an'ny marika lafo vidy
Maherin'ny ampahatelon'ny tetikasa vao vita sonia tany Azia atsimo tao anatin'ny 18 volana lasa izay dia misy hotely sy hotely ao amin'ny ambaratonga lafo vidy, ahitana marika toa ny JW Marriott sy W Hotels. Hita taratra amin'izany ny fitomboan'ny fitakian'ny mpandeha amin'ny bespoke sy ny serivisy ary serivisy tena tsara. Ireo mpitsangatsangana dia afaka maminavina ny laharana voalohany amin'ny marika W Hotels any Jaipur miaraka amin'ny W Jaipur tamin'ny 2024. Vantany vao nosokafana ny trano fandraisam-bahiny dia manantena ny hanakorontana ireo fenitry ny rendrarendra nentim-paharazana miaraka amin'ny serivisy mampiavaka azy, ny angovo mifindra ary ny traikefa vaovao. Mifototra amin'ny fiadanam-po tanteraka, ny fananana JW Marriott dia manolotra toeram-pialofana natao hamela ny vahiny hifantoka amin'ny fahatsapana ho salama - ao an-tsaina, velom-batana ary velombelona amin'ny fanahy. Manantena ny hisoratra anarana amina toerana miavaka maromaro ao Azia atsimo ao anatin'ny dimy taona ho avy, afaka manantena mialoha ireo mpandeha JW Marriott Ranthambore Resort & Spa miorina amin'ny iray amin'ireo toeram-piarovana biby malaza indrindra any India, The Ranthambore National Park; JW Marriott Chennai ECR Resort & Spa amin'ny morontsiraka atsimo mahafinaritra an'i India; JW Marriott Agra Resort & Spa ao amin'ny tanin'ny TAJ MAHAL; ary ny laharam-pahamehana ny marika JW Marriott any Goa sy Shimla - roa amin'ireo toerana fitadiavana toerana malaza any India - miaraka amin'i JW Marriott Goa ary JW Marriott Shimla Resort & Spa.
JW Marriott Hotel Bhutan, Thimphu antenaina hanamarika ny laharana voalohany amin'ny marika JW Marriott any Bhutan, andrasana hisokatra amin'ny 2025 ary hanolotra traikefa voafantina izay mankalaza ny toe-tsaina milamina amin'ny tany.
Maldives dia manantena ny trano fandraisam-bahiny JW Marriott faharoa amin'ny 2025, raha ny JW Marriott Resort & Spa, Embhoodhoo Finolhu - South Male Atoll misy villa miisa 80 dia antenaina hisokatra. Ny fanaovan-tsonia dia manaraka ny The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands vao nisokatra, nanamafy ny dian-tongotr'i Marriott amin'ilay toerana fialantsasatra malaza.
Select Brands Tohizo ny fitomboan'ny fitomboany
Misy marika toa ny Couryard by Marriott, Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels ary Moxy Hotels, ireo marika voafantina an'i Marriott dia mbola mitohy hatrany ao Azia atsimo izay maneho ny 40 isan-jaton'ny 22 amin'ireo hotely vaovao nosoniavina. Ny marika Moxy, fantatra amin'ny fomba fanandramana, milalao ary teboka mora azo, azo heverina fa hanomboka any India sy Nepal miaraka amin'ny Moxy Mumbai Andheri Andrefana ao amin'ny 2023 sy ny Moxy Kathmandu in 2025
Ny tsena ambaratonga faharoa sy fahatelo dia mijanona ho fifantohana ho an'ny Marriott International any India, manome ny fangatahana matanjaka avy amin'ny tompona sy ny mpandeha amin'ny marika voafantina. Natao ho an'ny mpandeha raharaham-barotra maoderina, ny marika Courtyard by Marriott sy Fairfield avy any Marriott dia manolo-tena amin'ny serivisy ho an'ny vahiny mahay mandanjalanja na inona na inona tanjon'ny diany. Miaraka amin'ireo fifanarahana natao sonia vao tsy ela akory izay, Couryard by Marriott dia manantena ny hanampy trano vaovao dimy amin'ny portfolio misy hotely 20 manerana an'i Azia atsimo. Ny efatra amin'ireo fananana ireo dia andrasana hisokatra afaka dimy taona ho avy ary hipetraka amin'ny tsena roa ambaratonga roa ao India: Tokotanin'i Marriott Gorakhpur; Tokotanin'i Marriott Tiruchirappalli; Tokotanin'i Marriott Goa Arpora; ary Tokotanin'i Marriott Ranchi. Manantena i Fairfield fa hanampy fananana vaovao roa ao Jaipur. Any Sri Lanka, ny Tokotanin'i Marriott Colombo manantena ny hanamarika ny laharana voalohany amin'ny marika Couryard ao amin'ny firenena, kasaina hisokatra amin'ny 2022.
Ny marika Premium dia manamafy ny toerany
Antenaina fa hampitombo ny fitomboan'ny marika premium any Azia atsimo, ny fanaovan-tsonia vao tsy ela dia ahitana ny Katra Marriott Resort & Spa any India sy ny Le Meridien Kathmandu, izay antenaina ho laharana voalohany amin'ny marika Le Meridien any Nepal. Ankoatr'izay, ny Bhaluka Marriott Hotel manantena ny hanamarika ny fidirana ny marika Marriott Hotels any Bangladesh, andrasana hisokatra amin'ny 2024.
Ny Marriott International dia milahatra tsara any Azia atsimo miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny miisa 135 manerana ny marika 16 miavaka amin'ny firenena dimy, mikendry ny hanome traikefa miavaka amin'ny ampahan'ny mpandeha. Ireo marika miasa ankehitriny any Azia atsimo dia misy: JW Marriott, St. Regis, The Ritz-Carlton, W Hotels, ary The Luxury Collection amin'ny ampahany lafo vidy; Hotely Marriott, Sheraton, Westin, Port of Tribut, Le Meridien, Renaissance ary ny trano fivarotana Marriott Executive amin'ny sehatra premium; Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Fairfield by Marriott ary Aloft Hotels, ao amin'ny sokajy serivisy voafantina.